Liverpool oo wali la joogin la’ayahay xilli ciyaareedkan Kaddib guul muhiim ah ay ka gaareen Newcastle …+SAWIRRO – Gool FM
Dajiye September 14, 2019
(England) 14 Sebt 2019. Liverpool ayaa guul ay u baahneed ee muhiim ah kaga gaartay kooxda Newcastle United garoonkeeda Anfield, kadib markii ay kaga adkaatay 3-1
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-1 ay ku hogaamineysay kooxda Liverpool.
Daqiiqadii 7-aad kooxda Newcastle United oo marti ku aheyd garoonka Anfield ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, kaddib markii uu xiddigooda Jetro Willems uu dheesha ka dhigay 1-0, isagoo caawinta goolkan uu ka helay saaxiibkiis Christian Atsu.
28 daqiiqo Sadio Mane ayaa neefta ku soo celiyay taageerayaasha garoonka Anfield wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah, waxaana caawinta goolkan lahaa Andy Robertson.
Sadio Mane ayaa markale dhaliyay gool daqiiqadii 40-aad wuxuuna markan hogaanka u dhiibay kooxdiisa Liverpool, iyadoo ciyaarta ay sidaas ku noqotay 2-1.
Qeybta labaad ee ciyaarta marka dib leysugu soo laabtay Liverpool ayaa aheyd kooxda dheesha ku gacan sareysay maadaama ay ku ciyaareysay garoonkeeda Anfield, waxayna sameeyeen fursado kale halis ah ee goolal loo filan karay.
72 daqiiqo Mohamed Salah ayaa hogaanka u sii dheereeyay kooxdiisa Liverpool, wuxuuna dheesha ka dhigay 3-1, kaddib caawin uu ka helay saaxiibkiis Roberto Firmino.
Laakiin ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 3-1 ay Liverpool ugu awood sheegatay kooxda Newcastle United oo marti ku aheyd garoonka Anfield.